Ungangibonisa ukuthi ungathola kanjani ama-backlink aphezulu wekhwalithi?
Ngaphambi kwanoma yini enye, yini eyenza i-backlink yekhwalithi? Kuthathwa ngokujwayelekile, iphrofayli yakho yokuxhumanisa yewebhusayithi noma ibhulogi ihlolwe yi-Google isebenzisa izici eziningana eziyinhloko, njengegunya lokuxhumanisa, isizinda sesizinda, ukulinganisa umbhalo we-text, amathrekhi wokuxhumanisa kwemvelo, njll.Kungani kufanele wazi ukuthi ungathola kanjani ama-backlink aphezulu wekhwalithi kuphela? Kungenxa yokuthi ngokwemvelo ukwakha ama-backlink usanda kuba omunye wabonakaliso obaluleke kunawo wonke ku-SEO. Yingakho kufanele wazi izindawo ezilungile nezenzo ezifanele okufanele zithathwe ukuze uthole lezi backlink eziyigugu. Futhi ngizokukhombisa ukuthi ungathola kanjani ama-backlink esemgangathweni kusuka kumanethiwekhi okuxhumana nabantu, ukukhangisa kwe-athikili, ukukhishwa kwezindaba zabezindaba, namawebhusayithi okwabelana ngamadokhumenti. Ngakho, ake sibukeze bonke ngezansi.
Ngokuqinisekile, indawo yesimanje yemithombo yezokuxhumana ifanele ukukwakha isakhiwo. Futhi kunabantu abangaba ngu-12 amanethiwekhi omphakathi kanye namasayithi abezindaba abenezethameli ezinkulu kunazo zonke zabasebenzisi abakhuthele, njenge-Google Plus, i-Twitter, i-Facebook, njll.Into yukuthi wonke amapulatifomu e-intanethi adumile kuma-social media ngokuvamile anezinga eliphakeme lekhasi eliphakeme. Yingakho leli thuba elikhangayo linconywa ukuba livivinyelwe ukwakha i-quality link kuqala nokuphambili. Khumbula ukuthi ukuze uthole imiphumela emihle lapha kufanele ulungise isimiso sokuthumela okuphindaphindiwe noma uhlelo lwesiteshi semidiya. Ukwenza kanjalo, ngeke ukhulise kuphela izethameli zakho zamanje, kodwa zibhekise amakhasimende akho angasebenzisa usebenzisa okuqukethwe okuyingqayizivele neyingqayizivele ehlinzeka ngokubaluleka kwangempela, okusekelwe ngezithombe ezifanele, ama-infographics, amaspredishithi, njll.
Le ndlela cishe phakathi kwezindlela ezingcono zokuthola isu. Nakhu ukuthi ungathola kanjani ama-backlink aphezulu wekhwalithi ngokukhangisa kwe-athikili - vele ufune amagama angukhiye alungile bese ulungiselela izihloko eziningana ze-athikili. Okulandelayo, qala ukusebenza kokuqukethwe kwakho ukuze uthunyelwe kwezinye zezincwadi ezihlonishwa kakhulu. Ngaleyo ndlela, ungakhohlwa ukuhlanganisa izixhumanisi ezikhomba emuva kuwebhusayithi yakho enkulu noma ibhulogi. Vele uqiniseke ukuthi konke okukhona - kokubili imibhalo ye-anchor, nezinkinobho zokwabelana komphakathi kufanele zifakwe ngempumelelo ngaphakathi kwemibhalo yakho yekhwalithi.
Ama-website e-Media Media Ukukhishwa
Amawebusayithi ama-media asebenzelana nezindaba nazo izindawo ezinhle zokubamba ezinye izixhumanisi-ngoba nje konke okushiwo ngaphandle amasayithi amancane okufanele asakaze kabanzi kwiWebhu. Njengoba kunikezwa ukuthi lezi zingosi ezinkulu zomsakazo zifuna njalo okuqukethwe okusha noma ezinye izindaba ezivusa amadlingozi zenzalo enkulu yomphakathi, okudingayo ukuhlinzeka nge-athikili yekhwalithi ehlanganisa isihloko esishisayo esifanele embonini yakho noma niche. Vele uqiniseke ukuthi udala isihloko esizibandakanya kanye nomqukethwe ohambisanayo ozoheha izilaleli ezibhekiswe kuzo - futhi usuqedile.
Amawebhusayithi ekwabelana ngeDokhumenti
Lokho kungaba enye indlela enhle yokwakhiwa kwesixhumanisi semvelo, ngaphandle kokuhlinzeka ngezikhathi zangasese ezifanelekile nge-DoFollow isici. Ngaphezu kwalokho, imithombo eminingi noma ehlobene nayo ithembeke kakhulu yizinjini ezinkulu zokusesha ezifana ne-Google ngokwayo. Ngakho, leli thuba libukeka sengathi lifanelekile ngempela, akunjalo? Nakhu ukuthi ungathola kanjani ama-backlink aphezulu wekhwalithi kusuka kumawebhusayithi okwabelana ngamadokhumenti - nje unesici esifanele sokuqukethwe kwekhwalithi (i. e. , hhayi izihloko ezinamandla kakhulu, noma okuthunyelwe okugcwele ubude). Uma konke kulungiselelwe, kuzodingeka uhambise kuphela ngaleyo ndlela ulahle i-backlink ekhomba indlela eya kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi Source .